Better Negotiator : Get Better Results - Better Version
Better Negotiator : Get Better Results
June 21, 2021 2022-02-12 17:35
နေ့စဥ်ဘဝမှာ ငြင်းမရတဲ့ လုပ်ငန်းစဥ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ညှိနှိုင်းခြင်းမှာ ရလာဒ်ကောင်းကောင်းရယူနိုင်ဖို့အတွက်
နေ့စဥ်လုပ်ငန်းခွင်မှာ ညှိနှိုင်းရေးကို မဖြစ်မနေလုပ်နေရတဲ့ မန်နေဂျာတွေ
ဖောက်သည်၊ ဝယ်သူတွေ နဲ့ စဥ်ဆက်မပြတ် ညှိနှိုင်းရေးကို လုပ်နေရတဲ့ လူတွေ
သင်ခန်းစာတွေ အားလုံး လေ့လာပြီးလို့မှ ကိုယ့်အတွက် အသုံးမဝင်ဘူးဆိုရင် သင်တန်းကြေး ၁၀၀% ပြန်အမ်းပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Better Negotiator ကို
ညှိနှိုင်းပါတယ်ဆိုမှ ကိုယ့်ဘက်ကဘဲ အလျှော့ပေးနေရသလို ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတွေကို ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့
သိပ္ပံနည်းကျ လေ့လာထားတဲ့ လူတွေရဲ့ အပြုအမူနဲ့ဆိုင်တဲ့ ပညာရပ်တွေကို လက်တွေ့အသုံးချပြီး အကျိုးအမြတ်တွေရယူနိုင်ဖို့
တဖက်လူလက်ခံလာအောင် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိတဲ့ အဖြေတွေကို ရှာဖွေနိုင်ပြီး ဆက်ဆံရေးကောင်းတွေတည်ဆောက်နိုင်ဖို့
တစ်ဖက်က အနိုင်ကျင့်တဲ့ ပုံစံမျိုး အသုံးပြုလာတတ်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို အကောင်းဆုံးကိုင်တွယ်နိုင်ဖို့
အထူးဈေးနှုန်းမလွတ်အောင် အခုဘဲ စုံစမ်းလိုက်ပါ။
Better Negotiator ဖြစ်ဖို့ ဘာတွေသင်ကြားသွားမလဲ။
1. Decision Making and Negotiation Introduction
ညှိနှိုင်းခြင်းဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်တဲ့ သဘောတရားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေအပြင် ညှိနှိုင်းရေးသဘောတရားတွေကို လေ့လာမှာပါ။
ရလာဒ်ကောင်းကောင်းရဖို့အတွက် ညှိနှိုင်းရေးမှာ ပြင်ဆင်ခြင်းကနေ နောက်ဆုံး သဘောတူညီမှုရယူတဲ့အဆင့်ထိ ကြားထဲမှာ ဖြတ်သန်းရဲ့ အဆင့်တွေ၊ တစ်ဆင့်ချင်းမှာ ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကို အသေးစိတ်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
3. Effective Negotiation Practices
လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သုံးလေ့ရှိတဲ့ ညှိနှိုင်းမှု ပုံစံတွေက မတူပါဘူး။ ဘယ်အချိန်မှာ ကိုယ်တိုင်ကကော ဘယ်လိုပုံစံမျိုးကို သုံးသင့်တယ်။ တခြားလူကတော့ ဘယ်လိုပုံစံတွေကို သုံးနေလဲဆိုတာ သိပြီး အကောင်းဆုံး တုန်ပြန်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကို လေ့လာသွားမှာပါ။
5. Personality & Power
ညှိနှိုင်းရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာ လူအမျိုးမျိုး၊ ပုံစအမျိုးမျိုးနဲ့ လာနိုင်တယ်။ ဘယ်လိုလူမျိုးတွေ့ရင် ဘယ်လို ပုံစမျိုးတွေပြောင်းလဲ သုံးစွဲနိုင်မလဲဆိုတာ နားလည်ရမယ်။ ဒါအပြင် ညှိနှိုင်းရေးမှာ ရလာဒ်ဟာ ဘယ်သူဆီမှာ ဘယ်လောက်ပါဝါရှိနေသလဲဆိုတာ အများကြီးမူတည်တယ်။ ကိုယ်တိုင် ဘယ်လိုပါဝါမျိုးတွေရှိနေလဲသိပြီး ပါဝါချိန်ညှိမှုတွေလုပ်နိုင်ပြီး လိုချင်တဲ့ ရလာဒ်တွေကို ဖန်တီးနိုင်ဖို့ပါ။
6. Manipulations & Ploys
ဖြားယောင်းမှုတွေ၊ နည်းပရိယာယ်တွေ လုပ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်လဲ တချို့အချိန်တွေမှာ လုပ်မိလေ့ရှိတယ်။ ဘယ်လိုနည်းပရိယာယ်တွေကို ကိုယ်တိုင်သုံးနိုင်သလို တဖက်က သုံးလာရင်လဲ ဘယ်လို ဖြေရှင်းတုံ့ပြန်နိုင်မလဲဆိုတာကို လေ့လာသွားမှာပါ။
7. Rational And Emotional Planning
ကံကောင်းချင်ရင် ရလာဒ်ကောင်းတွေလိုချင်ရင် ပြင်ဆင်ခြင်းဟာ အရေးကြီးတယ်။ လူတွေမှာ ခံစားချက်ကို ဦးစားပေးပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာ ပိုများတယ်။ ညှိနှိုင်းရေးမှာ အကျိုးများများရဖို့ Emotional ရော Rational ပိုင်းမှာပြင်ဆင်ထားရမှာဖြစ်တယ်။
တက်သင့်တဲ့ သင်တန်းကောင်းတစ်ခုပါ။ လူမှုဘဝနေ့စဉ်ကြုံတွေရတဲ့ပြဿနာအများစုက မှားယွင်းတဲ့ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းမှုတွေကြောင့်ပါ။ ဒီသင်တန်းက ကျွန်တော်တို့တစ်လျှောက်လုံးလွဲမှားလာတဲ့တစ်ဖက်သတ်အနိုင်ယူချင်စိတ် ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမလုပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေရဲ့အမှားတွေကိုသိမြင်စေပြီး နှစ်ဖက်လုံးလက်ခံနိုင်တဲ့အဖြရ‌ေအာင်ဘယ်လို ညှိနှိုင်းအဖြေရှာရမယ်ဆိုတာကို နိုင်ငံတစ်ကာကျင့်သုံးနေတဲ့သီအိုရီတွေနဲ့ဒီနိုင်ငံကလက်တွေအခြေအနေတွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးသင်တန်းသားတွေနားလည်အောင် စံနစ်တကျသင်ပေးတဲ့သင်တန်းကောင်းတစ်ခုပါခင်ဗျ။
ဦးခေတ်မောင်လုပ်ငန်းရှင် ၊ စိန်နဂါးရောင်းဝယ်ရေး
“ကိုယ်လိုချင်တာတစ်ခုခုရှိနေပြီဆိုရင် ညှိနှိုင်းရေးလုပ်ရတော့မယ်။ ညှိနှိုင်းရေးလုပ်တဲ့ အခါ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ရန်မဖြစ်ရအောင်၊ မိတ်မပျက်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲ။ ဘယ်လိုရလာဒ်ကောင်းအောင် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် နည်းတွေသုံးမလဲ။” ဒါတွေသိချင်ရင်တော့ သင်တန်းမှာ အသေအချာ ပြောပြထားပါတယ်။ ခြုံပြီးပြောရရင် ဘယ် field ထဲကပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အသက်အရွယ် ဘယ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် negotiation Technique တွေ method တွေ theory တွေ concept တွေကိုတော့ လေ့လာထားသင့်ပါတယ်။ စာအုပ်ဖတ်ရင် ၆ အုပ်လောက်ဖတ်ရမယ့်ဟာကို အခု better negotiator သင်တန်းမှာ 13.5 နာရီလောက်နဲ့ သင်ပေးတာမို့ အချိန်ကုန်သက်သာပြီး ထိထိမိမိရှိပါတယ်။ အန်တီခိုင် ရှားရှားပါးပါး Recommend ပေးတဲ့ထဲက ဒီသင်တန်းကိုတော့ Recommend ပေးပါတယ်။ တက်ကြည့်ပါ ၊ အချိန်ကုန်ရကျိုး နပ်ပါတယ်။
မခိုင်မျိုးမြတ်ထွန်းCEO & Founder, Jade Rose Myanmar Souvenirs and Jewelry